iPhone Dhibaatooyinka Alarm iyo Dhibaatooyinka
Your iPhone malaha waa wax kasta oo aad si. Sidaa darteed ma aha wax aan caadi ahayn inaad aad alarm maalin kasta aad iPhone iyo filayaa inay aad app hurdada. In la soo dhaafay dhawaan si kastaba ha ahaatee, digniinta iPhone ayaa la ogaaday inay sababi kara dhibaatooyin dhowr ah u isticmaala. Dhibaatada ay leedahay nidaam alarm haleysan yahay in ay waayeen qasan maalinta oo idil. Haddii aad goor dambe tahay inuu tooso wax kasta oo aad samayn maalintaas waxaa la samayn doonaa goor dambe. Dhibaatooyin alarm Kuwan waxaa si kastaba ha ahaatee mar kasta waxa ay halkaas joogi si ay u bixiso si aad naftaada la hubeeyo habab kala duwan si wax looga qabto arrimaha alarm kala duwan. Aan ku bilaabaan dhibaatada ugu badan ee dhawaan soo garay ku dhowaad dhammaan dadka isticmaala iPhone.
1. Alarm guuldarraysato in ay ka shaqeeyaan inta lagu jiro kayd badallo
In la soo dhaafay dhawaan, digniinta iPhone ku guuldareysatay in ay ka shaqeeyaan inta lagu jiro kayd iftiin ee November ka. Alaarmiga ayaa si fudud u diiday in ay ka shaqeeyaan iyo in kasta oo dad aad u badan oo la sheegay in dhibaatada, xal ma laga helay ilaa wakhti danbe mooye. Sidaas sida aad ka dhacaya adiga iyo iPhone si looga hortago karaa?
Waxaad samayn by dejinta digniinta xusuuta, sida ka soo horjeeda hal hal. Kuwii dhigay digniinta ugu celiyo ma lahayn dhibaatadan.
2. Alarm aad u yar Ringer Volume
Ma waxaad tahay mid ka mid ah dadka kuwa seexdaan iyada oo dhawaqa aad alarm ee? Haddii ay taasi dhacdo aad u badan, waxaa muhiim ah in aad barato sidii aad u dhigay mugga on ringer aad alarm ee. On iPhone ka, waa mid aad u fudud, aad qabsato karaa mugga adigoo isticmaalaya kor u qaadaysaa codka iyo badhamada mugga hoos dhinaca telefoonka.
3. aad illowdo in aad u alarm
Aad aad u mashquul ah in la xusuusto in ay qarka u saaran tan digtoonaanta aad subaxdii soo socda? Waxaad si fudud u xallin karo dhibaatadan iyadoo dejinta digniinta soo noqnoqda sida aan horay u aragnay. Dhabaha kale waa in Siri dhigay alarm aad u. Kaliya waxaad ka heli kartaa Siri si aad u alarm baraarujin maalin kasta. Halkan sida.
Siri ay jawaab u tahay amarradii aad ka muujiyay sidaas darteed haddii aad rabto in aad Siri si ay u dejiyaan digniin iyo baraarujin at 7 subaxnimo, inaad sameyso oo dhan waa inaad u sheegtid Siri inuu sameeyo wax. Waxaad sidoo kale weydiin kartaa Siri si loo hubiyo digniinta ama dami digniinta aad. Haddii aad run ahaantii mashquulka this s hal hab si loo hubiyo in aad ha ilaawin inaad dhigay digniinta ah.
4. codadka alarm iPhone adiga
Haddii aad si fudud u ma jecli codadka alarm on iPhone taas oo inta badan dadka ku heshiin doonaa waa in aan u Waxyoon, waxaad ka maktabadda dhigay karaa music aad si toos. Halkan sida
Burcad app Saacad ka dibna garaac button Alarm ah. Tubada on calaamad + inay ku darsadaan alarm cusub ama ay doortaan alarm ah ee hadda jira si ay u beddelo. Tubada ku dhawaaqa ka dibna soo qaado hees doorashada si aad u dhigay digniinta. Markaas ka jaftaa dhabarka iyo badbaadin.
5. Waxaad ku neceb markii digniinta gariira sidoo
Habkaani wuxuu ku gariirka on iPhone wuxuu noqon karaa mid aad u awood badan, mararka qaarna waxaad kaliya oo aan u rabo. Waxaad si fudud gab karaa doorasho gariirin aad digniinta adigoo raacaya tallaabooyinkan aad u fudud.
Tubada ku dhawaaqa ah ee aad taleefan. Waxaad ka heli doontaa laba hab halkan, gariiro giraanta iyo gariiro on aamusay. Disable labada kala dooranayo.
Dabcan aad u celin kartaa dib u adigoo samaynaya soo horjeeda. Marka lagu sameeyey, aad alarm mar dambe gariiro doonaa.
6. Button snooze dhibaato
Dhibaato weyn Avery digniin iPhone waa in hal mar aad ku sawirnaa on snooze ka dibna booqo Screen lagu qodi jiray, ma suurtowdo in la ogaado inta ay ka hor alarm mar kale iska tagaa. Sida kaliya ee ay ka shaqeeyaan iyada oo dhibaatadan waa in ay dib ugu soo laabtaan app Digniinta ka dibna dami alarm ka dibna waxa uu dib u daaraa. Waxa kale oo aad kaliya waxaa ka tagi karo on this page mar kugu dhuftay button snooze ah.
7. Marka aad rabto in aad joojiso alaarmiga
Ma waxaad tahay nooca qofka soo tooso ka hor alarm iyo rabto in aad u gab ka hor inta siddo? Nasiib darro aad u, ma jirto si taas loo sameeyo marka laga reebo ag maraya dib app Alarm ah. Waa waqti, laakiin sida kaliya ee waxaa la samayn karaa.
Kor ku xusan ayaa ka mid ah dhibaatooyinka ugu caansan ee aad la kulmi kartid marka la isticmaalayo habka alarm iPhone ee. Xal waa mid fudud waa in si aad ayaan wajihi dhibaato la mid ah muddo dheer.
> Resource > iPhone > Dhibaatooyinka Alarm iPhone iyo Dhibaatooyinka